Posted by ကို Tranquillus | ဒီဇင်ဘာလ 17, 2021 | web ပေါ်မှာ
ဥရောပ အောင်လက်မှတ်အတွက် အဓိက တိုးတက်မှု သုံးခု
ပထမဆုံး EUCC အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် (EU ဘုံသတ်မှတ်ချက်) သည် 1 ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် စတင်သင့်ပြီး cloud ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ဒုတိယ EUCS schema ရေးဆွဲရေးသည် အပြီးသတ်အဆင့်တွင် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
တတိယ EU5G အစီအစဥ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခုမှ စပြီးပါပြီ။
ANSSI၊ အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိအမှတ်ပြု အာဏာပိုင်
သတိပေးချက်အနေဖြင့်၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ2019 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ စည်းမျဉ်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိအမှတ်ပြု အခွင့်အာဏာကို သတ်မှတ်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုစီကို နှစ်နှစ် ပေးခဲ့သည်။ ပြင်သစ်အတွက် ANSSI က တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အေဂျင်စီသည် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဖွဲ့များ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် အသိပေးချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ဥရောပ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်အစီအစဉ်များ၏ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်မှုများအတွက် အထူးသဖြင့် ၎င်းအတွက် ပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုစီအတွက်၊ မြင့်မားသောအဆင့်ဖြင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် အေဂျင်စီက တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အာမခံချက်။
ပိုနားလည်ချင်ပါသလား။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ ?
ပေါ့တ်ကာစ်၏ ဤအပိုင်းတွင် NoLimitSecuမကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ANSSI ရှိ "အခြားလုံခြုံရေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ" ပရောဂျက်၏ တာဝန်ခံ Franck Sadmi သည် အဆိုပါ ပင်မအခြေခံမူများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို တင်ပြရန် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ.
ဥရောပအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- 2022 အတွက် ဘယ်လိုအလားအလာရှိလဲ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2022Tranquillus
ဖတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် အဆိပ်ရှိသောသတ္တုများပါဝင်မှုကို အတူတကွ လျှော့ချကြပါစို့
လွန်ခဲ့သောANSSI သည် Log4Shell လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးသည်။
အောက်ပါပုံပျက်နိုင်သော အစိုင်အခဲများ၏ မက္ကင်းနစ်